I-Golden Triangle Tour Package India | Shayela @ + 91-993.702.7574 Ukubhuka
I-Golden Triangle Tour ye-India
I-India inkulu kakhulu. Ubukhulu bomlando namasiko yinto engenakuqhathaniswa. Ukuhlela uhambo kungadala futhi ukujikeleza okukhathele kungakuqeda, i-Golden Triangle Tour Package India izokunika ithuba lokubona ubuciko, amasiko namagugu eqiniso eNdiya. Uhambo lwesinexantathu lwegolide luyisingeniso se-quintessential kwisiko, inkolelo, nomlando we-India, ikakhulukazi okokuqala ngqa. I-triangle triangle yegolide akungabazeki ukuthi yilezi zifunda ezithandwayo zaseNdiya ezinikeza ithuba elimangalisayo lokumangaza ubuhle, inkazimulo nesiko elinamandla. I-Golden Triangle Tour Package India izokusiza ekuhleleni uhambo oluphelele lokuvakasha elizokushiya lihlelwe ngemikhumbuzo ejabulisayo impilo yonke. Ukuzilandelela umlando othakazelisayo, uqale izinkulungwane zeminyaka izindawo ze-Golden Triangle ziyizinto eziqakathekile kunoma yikuphi ukuvakasha kwe-India. Ukuqala nge Delhi, leli dolobha lalikhonza njengenhloko-dolobha yomlando walo wonke imibuso yakudala, ngaleyo ndlela iphethe ifa elingenakuqhathaniswa nanoma iyiphi enye ingxenye yomhlaba. I-Agra, enezihlalo zeMughal Empire enamandla, ivuleke ezinye zezikhumbuzo ezimangalisa kakhulu i-Era Golden, eyake yabusa phezu kweNdiya. Nge-Golden Triangle Tour Package India, uzokwazi ukuthola inkazimulo yangempela yeNdiya. Ehlanganiswe ngesimo sesithathu, i-Golden Triangle Tour iphasela lase-India iveza eyodwa ngemibala eminingi eNdiya futhi ayikwazi ukulahlekelwa.
I-Delhi (i-02 Night) - i-Agra (i-02 Nights) - i-Jaipur (i-02 Nights)
Uhlelo lwe-06 Nights | Ikhodi Yokuvakasha: 055
Ukwamukelwa lapho ufika eNew Delhi International Airport ngokumele ummeleli wethu futhi udlulisele ehhotela. Ukulala ebusuku kuDelhi.
Ngemuva kokudla kwasekuseni, qhubeka uthola umxube wesimanjemanje nesendulo. Yazi kahle inhlonipho yomlando yenhloko-dolobha. Ukuvakasha kwasekuseni eDelhi okuhlanganisa i-Red Fort, i-Jama Masjid, i-Chandni Chowk no-Raj Ghat. Ngemuva kwekhanda lesidlo sakusihlwa ukuya ethempelini laseBirla, iPhalamende leNdlu, iNdlu kaMengameli, Isango laseNdiya, izakhiwo zikaHulumeni noQutab Minar. Ukulala ebusuku kuDelhi.
Lokhu ekuseni kusuka ku-Agra "UMTHETHO WASE TAJ". Vakashela iTombandra Tomb ngenkathi ushayela e-Agra. Qhubekela ku-Agra. Lapho ufika, dlulisela ehhotela. Ukulala ebusuku ku-Agra.
Phindela emuva emakhasini omlando njengoba uzovakashela i-TAJ MAHAL edumile. Ebikwa njengeSayithi leMagugu eNhlaba, iTaj Mahal yaziwa ngomsebenzi wayo omuhle kakhulu nge-marble. Yakhiwe ngu-Shah Jahan enkumbulweni yomkakhe uMamtaj Mahal. I-Taj Mahal namuhla imile njengengxenye yothando, ubuhle, kanye nezakhiwo. Kamuva uvakashele i-Agra Fort, Ibhomu lika-Itmadullah kanye ne-bazaar. Ngobusuku ehhotela.
Ngosuku lwesihlanu, uzoshiya uJaipur. Eyaziwa ngokuthi 'i-PINK CITY OF INDIA', iJaipur iyinhloko-dolobha yomhlaba ogwadule waseRajasthan. Vakashela idolobha elibomvu elise-sandstone le-Fatehpur Sikri ne-Bharatpur Bird Sanctuary endleleni eya eJaipur. Fika kuJaipur uphinde uthumele ehhotela. Ukuhlala ebusuku ehhotela.
Leli langa ekuseni lijabulela ukuvakasha kweJaipur, inhloko-dolobha yaseRajasthan. Vakashela i-Amber Fort, i-Birla Temple, i-Jantar Mantar, i-City Palace Museum, i-Hawa Mahal ne-Johari Bazaar. Ngobusuku ehhotela.
Ngemuva kokuhamba kwasekuseni ekuhambeni kokuhamba kwesikhumbuzo sezindiza.